Madaxweynaha Puntland Oo Farmaajo Ka Hor Istaagay Dhagax Dhiga Waddada Isku Xidhaysa Badhan Iyo Ceel-Daahir Iyo Sababta Oo La Xidhiidha Somaliland
(Hadhwanaagnews) Friday, January 12, 2018 17:46:11
Garoowe(HWN):-Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa madaxweynaha dawlada federaalka ah ee soomaaliya Md Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ka hor istaagay inuu dhagax dhigo waddo isku xidhaysa deegaanka Ceel-Daahir oo ka tirsan maamulka Puntland iyo degmada Badhan ee somaliland.
Madaxweyne Farmaajo oo ku guda jira safarka dhulka ah ee uu ku marayo deegaano ka mid ah maamulka Puntland ayaa qorshaystay inuu dhagax dhigo waddadaas oo muhiim u ah isku socodka bulshada iskaga gudbaysa dawladaha somaliland iyo Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo iyo weftigiisa oo ku hakaday deegaanka Ceel-Daahir ayaa kulan la qaatay madax dhaqaameed ka soo deegaankaasi oo qorsheeyey in loo dhagax dhigo waddada ayaa madaxweynaha kala kulmay
cudur daar uu ka sameeyey go’aanka uu madaxweyne Gaas kaga hor istaagay inuu dhagax dhigo waddadaas.
Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdi wali Gaas ayaa go’aankiisa ku sababeeyey inuu ka cabsi qabo inay dawlada somaliland dagaal kaga jawaabto dhagax dhiga madaxweyne Farmaajo ee waddadaas, isaga oo xusay inaan maamulkiisu wakhtigan lahayn awood ay iskaga caabiyaan ciidamada qaranka somaliland ee ku hawlan inay sugaan xuduuda dalkooda.
Madaxweyne Farmaajo oo deegaanka Ceel-Daahir kula kulmay madax dhaqameed kala duwan ayaa ku war geliyey in culaysyo fara badan oo haysta madaxweynaha Puntland ay keeneen inaan wakhti xaadirkan la dhagax dhigin waddada isku xidhaysa Badhan iyo Ceel-Daahir.
Warar kale ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka Puntland uu hore u dhibsaday safar uu wasiirkii qorshaynta ee dawlada federaalka ahi ku tagay degmada Badhan ee ka tirsan dhulka somaliland, waxaanu warku intaas ku daray in madaxweyne Gaas si weyn uga digtoon yahay dagaal kaga yimaada ciidamada somaliland kaas oo ay sabab u noqon karaan masuuliyiinta dawlada federaalka ahi.
Go’aanka madaxweynaha Puntland ayaa ku soo beegmaysa wakhti ay ciidamada qaranka somaliland qabsadeen deegaanka Tuka-raq oo waxyar u jira magaalada Garoowe ee uu ka taliyo madaxweyne Gaas isla markaana diyaar u ah inay talaabo milatari qaadaan wakhti kasta oo loo baahdo.
Dhinaca kale madaxweyne Farmaajo oo wali ku guda jira safarka uu ku marayo deegaanada maamulka Puntland ayaa maanta gaadhay magaalada Boosaaso, isaga oo uga gudbaya magaalada Gaalkacayo.